‘राजनीतिमा अपराधीकरणको चरम रुप’ – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/‘राजनीतिमा अपराधीकरणको चरम रुप’
काठमाडौं । २०५० देखि ७५ सालसम्म काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा जो प्रमुख भएर आए, हरेकको सूचीमा हुन्थे राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्ग । चुनाव हुँदा होस् या ‘गुण्डा समूह’सँग जोडिएका जुनसुकै घटना हुँदा होस्, उनी पक्राउ पर्नु सामान्य बनिसकेको थियो ।
०५९ सालमा ठमेलको एक्सजोन डिस्कोमा नेपाली सेनाका एकजना मेजरलाई कुटपिट गरेपछि चाहिँ उनी चर्चामा आए । आफू पनि कारबाही पर्ने डरले मेजरले उजुरी त दिएनन्, तर प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उनलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला पनि सुनायो ।
मनाङ्गे मन्त्री बन्नुले समग्र राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ भन्ने देखाउँछ – हेमन्त मल्ल, पूर्वडीआईजी
नेपालमा गुण्डागर्दीमा संलग्नहरुले प्रहरीबाट बच्न राजनीतिक फेरो समात्ने गरेका छन् । मनाङ्गे पनि ०४७ सालदेखि ०६८ सालसम्म अधिकांश समय राप्रपासँग जोडिएका थिए । तर, ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राप्रपा कमजोर बन्दै जाँदा उनले अन्य दलहरुको फेरो समात्न थाले ।
मनाङ्गको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. ‘ख’बाट उनलाई २०७४ सालमा एमालेले टिकट दिने निर्णय गर्‍यो । तर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विरोध भएपछि पार्टी निर्णयबाट पछि हट्यो । मनाङ्गेले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, एमालेले कसैलाई उठाएन ।
‘जनता हेर्‍यो त्यतै भ्रष्टाचार छ, न काम गर्ने अधिकार छ, न समितिले केही गर्न सक्छ’ भन्दै ७ असार २०७७ मा प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि पनि उनी चर्चामा आएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोसमनाङे-लामा सम्बन्धः गुरू-चेला !
रमेश खरेल भन्छन् – राजनीतिमा अपराधीकरणको पराकाष्ठ
मनाङ्गे मन्त्री बनेपछि पहिले उनलाई पक्राउ गर्ने अधिकृतहरु चाहिँ के सोचिरहेका होलान् ? उनलाई दुईपटकसम्म पक्राउ परेका एक अधिकृत यो प्रश्नमा हाँस्छन् मात्र । भन्छन्, ‘यो देशमा गुण्डागर्दीले कुन तहसम्म जरा गाडेको छ भन्ने प्रमाण हो ।’
मनाङ्गेहरुलाई डन नभई ‘फ्याउरे भएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेल पनि उनलाई मन्त्री बनाइनुले देशका माथिल्लो तहमा बस्ने पनि गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने देखिने बताउँछन् । ‘यो राजनीतिमा अपराधीकरणको पराकाष्ठ हो’, खरेलले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘दिपक मनाङ्गले एउटा क्षेत्र तर्साउँथ्यो, नेताहरु देशै तर्साइरहेका छन् । त्यसैले दुईबीच फरक देखिन्न ।’
अर्का एकपूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चाहिँ बहालवाला थुप्रै सांसदहरुको पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएको उल्लेख गर्दै ‘को कति एक्सपोज भए’ भन्ने मात्र फरक रहेको सुनाउँछन् ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि मनाङ्गे मन्त्री बन्नुले समग्र राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ भन्ने देखाएको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले राजनीतिमा जुन किसिमका घटनाहरु देखिइरहेका छन्, त्यसले समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण पैदा गराइरहेको छ ।’
काठमाडौं प्रहरीका अर्का एक अधिकृतका अनुसार मनाङ्गे भन्थे, ‘पुलिस नेतादेखि डराउँछ, नेता गुण्डादेखि डराउँछ, गुण्डा पुलिसदेखि डराउँछ ।’ तर गुण्डागर्दीमा संलग्नहरु आफैं राजनीतिज्ञ बन्न थालेपछि मनाङ्गेले सुनाउने गरेको नेता–प्रहरी–गुण्डाको चक्र पनि अब असान्दर्भिक हुँदै जानेछ ।